Antso ho an'izay mitondra: Gadrao Andry Rajoelina | Hery - Tsiky dia ampy |
Antso ho an'izay mitondra: Gadrao Andry Rajoelina
2009-01-28 @ 08:11 in Politika
Efa niaiky i Andry Rajoelina fa olony no nandeha teny amin'ny MBS. Nolazainy ho fatam-poko ho fanta-pirenena, hatr@ mpanao gazety vahiny fa mpitolona tao aminy ilay maty voatifitra teny @ MBS. Nanome baiko izy hanakatonan'ny vahoaka ny MBS ka ny olona nirahina no nandeha koa hanakatona ny RNM. Satria an'ny fanjakana ny RNM ka noho izany dia an-dRavalomanana koa. Dia nodorana toy ny tany amin'ny MBS koa ny RNM izay fananam-panjakana.
Noho izany dia Andry Rajoelina, izay niantso désobéissance civile, no tomponandraikitra voalohany tamin'ny zavaniseho teto Antananarivo hatramin'ny alatsinainy. Miantso ny vahoaka hikomy izy kanefa mbola tsy eo am-pelatanany akory ny fahefana. Mbola tsy nanana drafitra akory izy hiarovana ny vahoaka sy ny fananam-panjakana raha sendra misy ny mihoa-pefy. Koa tompon'andraikitra voalohany amin'izany fikomiana nitranga izany Andry Rajoelina ka tokony hotsaraina sy hogadraina.
Matoa ry Zafy sy ny mpanohitra tsy nahasahy nanetsika vahoaka dia fantatr'izy ireo fa rehefa vahoaka noana sy mahantra no hetsehina dia tsy ho voafehy. Ary satria tsy mbola nahazo ny fon'ny mpitandro ny filaminana ry Zafy dia naleony tsy nihetsika. I Andry Rajoelina kosa nahita fa misy vahoaka manaraka azy dia nanome baiko tsy ampieritreretana. Nanaraka azy tokoa ny vahoaka noana ka tsy voafehiny intsony.
Raha niantso désobéissance Ravalomanana tamin'ny 2002 vokatry ny tsy nanekena ny fanaovana fampitahana ny PV tamin'ny fifidianana dia satria fantany fa voafehiny tsara ny vahoaka raha sendra mikomy. Tsy nihetsika tanteraka izy raha tsy efa azony antoka fa hisy avy amin'ny tafika hiaro ny vahoaka.
Na dia nataon'ny mpanohitra fitaovana aza i Andry Rajoelina dia tompon'andraikitra voalohany satria avy aminy ny baiko hisian'ny fikomiana. Koa ny vahoaka izay very fanantenana amin'izao fotoana izao, ny vahoaka izay nantsoina hikorontana nefa tsy narovana, ny vahoaka izay leo fitondrana nefa tsy misy mpiaro dia miantso an'izay mbola manana fahefana na iza na iza mba hisambotra izay mpanakorontana. Miantso hanagadra an'i Andry Rajoelina izay atidoha nikotrika izao korontana izao. Ary miantso ny hisian'ny fifampidinihana ho an'ireo izay vonona hanarina an'Antananarivo sy Madagsikara.